DOWNLOAD Comco Ikarus C42 နီ-လက်ဝါးကပ်တိုင် FSX & P3D - Rikoooo
Comco Ikarus C42 နီ-လက်ဝါးကပ်တိုင် FSX & P3D
Size ကို 8.57 ကို MB
Changed 22-06-2015 18: 30: 12
Author: Byron Warwick, Rikoooo.com အားဖြင့် repaint နှင့် repack
ဒေါင်းလုပ် FSX & ရေနွေးငွေ့ Edition ကို & P3D v1 သည်။ * v2 v3 v4 # ဆိပ်ကမ်း-ကျော်မျှသဟဇာတ P3Dv4 #3D ရဲ့ Virtual cockpit စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့
ဒီဗားရှင်းအဘို့ဖန်ဆင်းထားသည် FSX & P3Dအတူသဟဇာတ version တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်FS2004 ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
တစ်ဦးပေါ်တွင်ပျံသန်း၏ဝမ်းမြောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ယောလ Soler ခြင်း, Arc-my-Ciel စစ်ဆင်ရေးနှင့်မသန်စွမ်းကလေးများနှင့်လူကြီးများမှလေယာဉ်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု, ပြင်သစ်, ဧဒုံ-လက်ဝါးကပ်တိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကို၏မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခွင့်အလမ်း Icarus ကို C-42 က Ultra-အလင်း.
arc-my-Ciel ရဲ့ရည်မှန်းချက်တိုင်းလူတစ်ဦး၏အလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးအကျယ်သူ့ရဲ့ Hard-ပြုပြင်သောအဖွဲ့ကပြသသည်: ၏ 70% Arc-my-Ciel ရဲ့လေယာဉ်မှူး Handicap ၏အခြေအနေကို၌ရှိကြ၏ (နားပင်း, paraplegia .. )
ဒါဟာ (ကြှနျုပျတို့ဝမ်းမြောက်စွာ Rikoooo ရဲ့ကြေငြာကြောင်းစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်www.Rikoooo.comArc-my-Ciel နှင့်အတူ) မိတ်ဖက်!
မစ္စတာ။ Erik Bender, လေကြောင်းနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ခြင်း simulation ချစ်သူများများအတွက်လူသိများတဲ့ "Rikoooo" ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်မစ္စတာ သောမတ်စ် Guiart ဆန္ဒအလျောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပြီး, ဧဒုံ-လက်ဝါးကပ်တိုင် '' လက်မှတ်အဆင်းအရောင်နှင့်အလှဆင် C42 Ikarus တစ်ခုအတိအကျ repaint, ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်မစ္စတာရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Byron Warwick အ 3D မော်ဒယ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, မည်သူမဆိုယခုMicrosoft®နှင့် Prepar2004D v3 နှင့်v1®အားဖြင့် (ပျံသန်းမှု Simulator2နှင့်ပျံသန်းမှု Simulator X®နှင့်အတူလေကြောင်း၏တစ်မူထူးခြားသောအွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့တသာနီ-လက်ဝါးကပ်တိုင် '' Ikarus ကိုသုံးနိုင်သည် ) Lockheed Martin®အားဖြင့်။
ဒီမိတ်ဖက်တဆင့်ပြင်သစ်ကြက်ခြေနီ Arc-En-Ciel ၏အမှုကိုဆီသို့ဦးတည်လူကိုဆွဲဆောင်ဖို့, မသန်မစွမ်းပုဂ္ဂိုလ်များဆီသို့ဦးတည်သည်၎င်း၏ကတိကဝတ် diffuse ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း; နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေးဝါဒီများကိုစွမ်းအားမှနိုင်စွမ်းစပွန်ဆာရှာတွေ့မှ။
ဧဒုံ-လက်ဝါးကပ်တိုင် '' 150th နှစ်ပတ်လည်အဘို့, Rikoooo နှင့် Arc-my-Ciel ရဲ့အဖွဲ့သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်္ဘောကြီးပေါ်လာခြင်းနှင့်လေကြောင်းနှင့်၎င်း၏သမိုင်းအတွက်အဖှဲ့အစညျးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဆက်လက်ပူဇော်လော့။ အတိအကျတရာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း, Red-လက်ဝါးကပ်တိုင် '' အကူအညီနဲ့ WW1 အတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှပျံသန်းရန်၎င်း၏ဆည်းကပ်ကျေးဇူးတင်အပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။
Rikoooo နှင့်အတူ Partership အတွက် Red-လက်ဝါးကပ်တိုင် "အော်ပရေတာ Arc en Ciel"
အသုံးဝင်သော link ကို: Page ကို Facebook ကအော်ပရေတာ Arc en Ciel
Ladd-On: ပြီးပြည့်စုံသော avec လေယာဉ်မှူးအခန်း virtuel, အထွာ et ၏သားတို့သည်personnalisésထုပ်ပိုး
Comco Ikarus C42 နီ-လက်ဝါးကပ်တိုင် FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်